U beddelo ogg / ogv, webm ama mkv on Linux oo leh OggConvert | Laga soo bilaabo Linux
U beddelo ogg / ogv, webm ama mkv on Linux oo wata OggConvert
Marar badan ayaan u baahanahay inaan u beddelno fiidiyoow ah .OGV .MKV (Matroska) ama .WEBM taleefannadeenna casriga ah, si aan ugu soo gelino degel ama wax kale. In kasta oo la adeegsanayo terminaalka waxaan ku guuleysan karnaa tan (mencoder ama ffmpeg), haddana qof walba ma jecla inuu mar walba adeegsado amarrada waana sababta saxda ah ee aan ula wadaago codsigan 🙂
cunt OggConvert Waxay u rogi karaan sedexdaan qaab oo leh dhowr guji oo fudud, kaliya dooro fiidiyowga aad rabto inaad beddesho, xulo qaabka iyo voila (markii ugu horeysaba ay u rogto .ogv):
Sidaad aragtay, waxay kaloo noo ogolaaneysaa inaan qeexno tayada codka iyo muuqaalka.
Laakiin tan kaliya maahan, halka ay ku qoran tahay Qaab muuqaal ah waad sheegi kartaa koodhka si aad u isticmaasho (Theora, Dirac ama VP8) iyo hoosta haddii ay riixaan Heer sare ikhtiyaarka ah Qaabka feyl, oo ay ugu beddelan karaan.mkv ama.webm
Sidaad u aragto, dalab fudud oo fudud
Waa hagaag wax kale ... Waxaan rajeynayaa inay tani caawinayso dhowr.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Aplicaciones » U beddelo ogg / ogv, webm ama mkv on Linux oo wata OggConvert
Waxaan u maleynayaa avidemux iyo gacan-qabashada horeyba shaqadaas si wanaagsan ayey u qabteen! 🙂
Ma jirto waddo wixii u rogaa gacan-jabis lagu arki karo DVD-ga, waxaan dhigay inta codec ay aqbasho iyo waxba ... xalka ugu dhaqsaha badan & wasakhda badan ee aan arkay waa ku dayashada tmpgencoder oo khamri ah laakiin waxaan u arkaa inay xoogaa niyad jabineyso Weli waxaa iga go'an inaan gacan-qaado
Avidemux ma fahmayo OGV gabi ahaanba. Waxaan ku beddelayay mencoder ama avconv adoo adeegsanaya qadka amarka. Dhamaadka waxaan ku sameeyay barnaamij yar Python-ka waana ku faraxsanahay.
si fiican ogv ima xiiseynayaan, maadaama koodhadhka ay adeegsadaan aad uga liitaan, doorbidaan mkv + x264
Cajaladda fiidiyaha ah ee aan isticmaalo (RecordMyDesktop) waxay soo saartaa oo keliya OGV. Iyo si aan meel ugu soo raro ama ugu gudbiyo dadka ila xiriira waa inaan u beddelaa wax ay fahmeen.
Waxaad leedahay Arista ama Winff oo ah beeb. ama haddii kale DeVeDe haddii aad rabto sidoo kale waa ku beddelaysaa ka hor inta aadan DVD gubin
Ku jawaab Carlos Ferra
Lamaane .. waa su'aal Ma ogtahay in ikhtiyaarka KDE PrntScr uu leeyahay ikhtiyaar uu ku daabaco kaliya daaqada ku hoos qoran tilmaamaha, sax? Waxaan ula jeedaa, ma jiraan lacag dhif ah ama wax .. 😀
Talo aad u fiican.
Haa, waan ogahay, laakiin markaa hooska daaqadda gadaashiisa ayaa xoogaa luntay ... Ma garanayo, ma jecli inay sidan ahaato 🙁
… Waxaan ahay yaab, ma ogtahay… LOL!
Gara waxaad u malaynayso dooddan ku saabsan Google+ bogga LibreOffice.
Dood aad u kulul. Sideed u aragtaa
Waxay mudan tahay sameynta koodh iyo astaamo loogu talagalay LibreOffice.
Waan tixgelin doonaa fikradaada.
Waxaan rajeynayaa inaan la rinjiyeyn.
Waad salaaman tihiin
Waan ka xumahay dib u dhaca, hada waan xiriiri karaa.
Marka laga hadlayo in ay mudan tahay in la sameeyo lambarro iyo astaamo loogu talagalay LibreOffice, dabcan waa sidaas!
Xaqiiqdii, haddii 'wax' loo sameyn karo si hadhow adeegsade kasta u beddeli karo astaamaha iyadoo geedi socodku uusan dheereyn ama adag, way fiicnaan lahayd 😀
Waad ku mahadsantahay shaqadaada
Horaan u rakibey waana mid aad u wanaagsan. Waad ku mahadsan tahay Tuto !!!
Jawaab Federico A. Valdés Toujague
waxtar badan ... waan isku dayi doonaa
Cajiib ah !. Waad ku mahadsan tahay Talooyinka!
Waxaan qorsheynayay raadinta wax sidan oo kale ah, mahadsanid caarada.
Gaara adiga oo otaku ah: 3 qaabkee bilaashka ah ee kafiicnaan lahaa in loo badalo taxanaha anime iyo filimada kujira mkv iyo kuwa kale oo kujira mp4 qaab qaab faham ama bilaash kafiican oon khasaaro badan lahayn
Ku jawaab Makubex Uchiha
x264 waa hirgelin bilaash ah oo ah h264 ..., qaab bilaash ah oo uqalma anime midna, hadaad indho wanaagsan leedahay, midka kuugu dhaw h264 waa vp8 / webm ..., laakiin kaalay, wali waa mayl tayo ahaan iyo riixitaan… ..
ragga okis grax ee xogta, waxaan tijaabin ku sameyn doonaa vp8 / webm fiiri haddii ay la kulanto filashadeyda tayada xD
Dhab ahaan, H264 shaki la'aan waa mid kamid ah xulashooyinka ugufiican, sida uu sheegay pandev.
nin, mkv waa qaab bilaash ah oo aad ogtahay?
Ku jawaab CitoplasmaX
Shukulaatada loogu talagalay wararka: RHEL 7 waxay isticmaali doontaa desktop-ka caadiga ah.
Muuji Boqolleyda Baterry